The Biggest Energy Challenges Faced by 7.8 Billion People – WorldRef
လူ ဦး ရေ ၇.၈ ဘီလီယံရင်ဆိုင်နေရသောအကြီးမားဆုံးစွမ်းအင်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများ
First Challenge: Energy Poverty
Second Challenge: Greenhouse Gas Emissions
How Does the Biggest Energy Crisis Challenges Affect the Economy?
ဇူလိုင်လ 14th, 2021
ထုတ်လွှတ်မှုကိုသုညသို့လျှော့ချခြင်းသည်လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းလူသားများကြုံတွေ့ရမည့်ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးစွမ်းအင်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကြောင့်မကြာမီလာရောက်မည့်ဘေးအန္တရာယ်သည်အမှန်တကယ်တွင် ပို၍ ဆိုးရွားသည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမဟုတ်ဘဲဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်။
စွမ်းအင်နှင့်ပတ်သက်သောစုံစမ်းမှုများနှင့်ရှားပါးမှုများကိုနိုင်ငံတကာတောင်းဆိုမှုများတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှလာမည့်အနှစ် ၃၀ အတွင်းစွမ်းအင်ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေ၏အောက်ခြေတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ရေနံသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်စျေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးနှင့်ရှားပါးသောအရင်းအမြစ်များအနက်တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ခေတ်မီနျူကလီးယားစက်ရုံများသည်သူတို့၏အကျိုးရှိသောအသက်တာကုန်ဆုံးလိမ့်မည်။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိသုခနှင့်အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်များ၏သုခချမ်းသာကိုခြိမ်းခြောက်သောအဓိကပြissueနာဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည် 87% ကမ္ဘာ့ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝသောနိုင်ငံများတွင်လူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုမြင့်မားသည်
ထုတ်လွှတ်မှုကိုသုညသို့လျှော့ချခြင်းသည်လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းလူသားများရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသောကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကြောင့်မကြာမီလာရောက်မည့်ဘေးအန္တရာယ်သည်အမှန်တကယ်တွင် ပို၍ ဆိုးရွားသည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမဟုတ်ဘဲဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်။
First Global Energy Challenge: Energy Poverty
၁။ ခေတ်မီစွမ်းအင် ၀ န်ဆောင်မှုမရှိခြင်းနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်းနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုနည်းခြင်းတို့ကိုလည်းစွမ်းအင်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
အီသီယိုးပီးယား၊ ယူဂန်ဒါ၊ မာလာဝီစသည့်ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများမှလူများသည်ခေတ်သစ်စွမ်းအင်နှင့်နည်းပညာကိုလက်လှမ်းမမှီသောကြောင့်ထုတ်လွှတ်မှုအလွန်နည်းသည်။
အဓိကအကြောင်းပြချက် - ဤနည်းပညာများမရရှိနိုင်ခြင်းသည်မကြာသေးမီကကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးပြproblemsနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူများသည်ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အပူပေးခြင်းအတွက်ခေတ်မီစွမ်းအင်ကိုမရရှိနိုင်ပါက၎င်းတို့သည်အစိုင်အခဲလောင်စာများ၊ အထူးသဖြင့်သစ်သား၊ မြေ, ဇာနှင့်အပင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုမှီခိုနေရသည် (ပုံ ၂) ။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) မှဖော်ပြသည့်ကမ္ဘာ့လေထုညစ်ညမ်းမှုကြောင့်စွမ်းအင်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတွင်နေထိုင်သောသူများ၏ကျန်းမာရေးသည်ကြီးမားသောစျေးနှုန်းဖြင့်ကြီးမားစွာပေးဆပ်ရသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအဆင်းရဲဆုံးသောသူများအတွက်မူ၎င်းသည်အချိန်မတန်မီသေဆုံးခြင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသေဆုံးခြင်းအတွက်အကြီးမားဆုံးအန္တရာယ်အချက်ဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေးသုတေသနပြုချက်အရမိုးလေ ၀ င်လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် 1.6 သန်း နှစ်စဉ်သေဆုံးမှုများ၊ သန့်ရှင်းမှုညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့်သေဆုံးမှုနှစ်ဆကျော်။ သစ်သားအားစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
According to recent reports of the Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO), using wood asafuel is the most important factor in forest degradation. In the African continent, East Africa, Central Africa, and West Africa, wood provides more than half of the energy.
After all, people are living in poverty due toalack of energy and electricity which means that food cannot be refrigerated (Figure 2). Poor people don’t haveawashing machine or dishwasher and sometimes there are no lights at night due to power outages. Thus, it becomes difficult for the poor and middle class to face the problem of the energy crisis.
Second Global Energy Challenge: Greenhouse Gas Emissions
3. ပါရီသဘောတူညီချက်သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပျမ်းမျှအပူချိန်မြင့်တက်မှုကိုစက်မှုမတိုင်မီအဆင့်ထက် ၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်တွင်ဆက်လက်ထားရှိရန်နှင့်“ အပူချိန်မြင့်တက်မှုကို ၁.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိဆက်လက်ကန့်သတ်ရန်အားထုတ်မှုများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်” ရည်ရွယ်သည်။
The energy production from fossil fuels has continued to go up. In 2020, energy production from fossil fuels accounted for more than 50% of total energy production. Energy production from renewables has also gone up but its share in total energy production needs to increase significantly for long term sustainability. If our dependence on fossil fuels continue to rise then we may find ourselves inasituation of energy crisis as fossil fuels are bound to get depleted at the rate at which we are using them (Figure 3).
အဓိကအကြောင်းပြချက် - အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံများတွင်နည်းပညာတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်စွမ်းအင်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှလူအနည်းငယ်သာခံစားကြရသည်။ အိုင်ဗန်နိုဗာနှင့်ဝုဒ်၏အစီရင်ခံစာတွင်ဂျာမနီ၊ အိုင်ယာလန်နှင့်ဂရိနိုင်ငံများထက် ပို၍ များပြားကြောင်းဖော်ပြထားသည် 60% အိမျထောငျစုမြားတှငျ ၂.၄ တန်အထိရှိသောနှစ်စဉ်လူတစ် ဦး ချင်းထုတ်လွှတ်မှုရှိသည်။
The only countries with emissions close to zero are those where most of the people suffer from energy poverty. The few countries which are poorest in Africa such as Malawi, Burundi, and the Democratic Republic of Congo.
The countries having higher GDP per capita have the better living conditions but the same countries also have higher carbon dioxide emissions. Emissions are high in places where child mortality is the lowest.
ဤသို့ဖြစ်ရခြင်း၏အကြောင်းအရင်းမှာလူတို့သည်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာစွမ်းအင်ကိုရရှိနိုင်ခြင်းနှင့်ရေရှည်ရေရှည်တည်တံ့ရန်အတွက်ထုတ်လွှတ်မှုသည်မြင့်မားလွန်းခြင်းဖြစ်သည်။ လူများသည်ကောင်းမွန်သောဘ ၀ ကိုရှင်သန်ရန်စွမ်းအင်ကိုလိုအပ်သည်။ သို့သော်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများသည်စွမ်းအင်၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သောကမ္ဘာတွင်ခေတ်သစ်စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့များများထုတ်လွှတ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
The results demonstrateasignificant positive relationship between the dependent variable variable CO2 emissions and the independent variable GDP per capita. CO2 emissions rise asaresult of economic growth, according to the positive relationship indicated (Figure 4).
The global energy crisis isamajor contributor to the economic downturn. The Ever increasing human population has resulted in the over exploitation of traditional energy sources.
The following are some of the most significant consequences of the global energy crisis on the economy :
1. According to the Autoregressive-Distributed Lag (ARDL) estimates, energy poverty hasanegative impact on economic development.
2. Air pollution from burning fossil fuels is projected to cause 230,000 deaths and $600 billion in economic losses per year in the United States alone.
3. The sharp increase in fuel prices caused by the energy crisis has hadanegative impact on the ခရီးသွားလုပ်ငန်း industry. With the increase in fuel prices, the cost of tourism has also increased, thus many can’t afford it.
Energy also hasapositive impact on employment levels. The development of energy resources generates employment. Energy generated by solar photovoltaic cells, landfill gas, or biomass facilities, for example, creates more jobs per unit of energy produced than energy generated from conventional sources.
1. Switch to renewable resources: The best solution is to reduce the world’s dependence on non-renewable resources. Most of the industrial age was created using fossil fuels, but there are also well-known technologies that use renewable energy, such as steam, solar, and wind energy. The2ways from which the electricity can be produced are:
a) Electricity production from Photovoltaics: Solar cells, often known as photovoltaics, are electronic devices that turn sunlight into electricity directly. Because solar energy isamature and cost-competitive technology that is constantly growing.
b) Energy Production from Hydropower: Hydroelectricity, often known as hydroelectric power, is electricity generated by water. Hydroelectricity hasacheap cost of production, making itacompetitive renewable energy source.
2. Performing an energy audit: စွမ်းအင်စစ်ဆေးခြင်းဆိုသည်မှာသင်၏အိမ် (သို့) ရုံးသည်စွမ်းအင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်စွမ်းအင်ထိရောက်စွာတိုးတက်စေရန်သင်လုပ်နိုင်သည့်အဆင့်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူများကပြုလုပ်သောစွမ်းအင်စစ်ဆေးခြင်းသည်သင်၏ကာဗွန်ဓာတ်လျော့နည်းမှုကိုကူညီနိုင်သည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်နှင့်ငွေကိုချွေတာရာရောက်ပြီးကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးစွမ်းအင်စိန်ခေါ်မှုများကိုရှောင်ရှားသည်။
3. Buy energy-saving products: ရိုးရာမီးသီးများကို CFL နှင့် LED တို့ဖြင့်အစားထိုးပါ၊ ၎င်းတို့သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝပ်ဝပ်ဝပ်နည်းမှုနည်းသောကြောင့်ကြာရှည်ခံသည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိလူတို့သည်လူနေအိမ်နှင့်စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် LEDs နှင့် CFLs ကိုအသုံးပြုပါကစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကျဆင်းနိုင်သည်။
သင်၏လိုအပ်ချက်များအတိုင်း WorldRef ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလေ့လာရန်အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ပါ။
စွမ်းအင်စာရင်းစစ် | ရေအားလျှပ်စစ် Solutions | နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပါဝါ | လျှပ်စစ်စနစ်များ | အပူစွမ်းအင် & Cogeneration